Uphando: UQhathanisa njani uMveliso wakho weMveliso? | Martech Zone
Uphando: UQhathanisa njani uMveliso wakho weMveliso?
NgoLwesibini, Juni 16, 2015 NgoLwesibini, Juni 16, 2015 Douglas Karr
Ukuqhubela ezantsi isungula uphando oluqhubekayo lwentengiso kwiindlela zokuvelisa umxholo. Ngelixa uninzi lophando olufumanekayo esidlangalaleni ngokubhekisele kwintengiso yomxholo iyonke, kunqabile kakhulu ulwazi oluthile lwabaqeqeshi bokuqukethwe ukuba basebenzise isiseko sendlela yokwenziwa kwemveliso, iinkqubo, izixhobo zabasebenzi, iindima, noxanduva, kunye netekhnoloji. Irundown iya kukhupha uhlaziyo olubalulekileyo kule datha ibalulekileyo unyaka wonke.
I-Rundown yenze uphando olufutshane lomxholo weengcali kwi-arhente, umshicileli, kunye namaqela omxholo wentsingiselo ukunceda ukukhanya malunga nokuba umxholo wenziwa njani. Ixesha elide, siza kuphinda sisebenzise idatha yehlabathi kubathengi bethu eRundown ukubonelela ngakumbi malunga nendlela imibutho eqala ngayo ukusuka kumxholo ukuya kumxholo, lingakanani ixesha elithathwayo ukuvelisa umxholo, iintlobo zomxholo eziveliswayo, kunye namanye amanqaku edatha .
Kutheni le nto kufuneka uthathe inxaxheba: Khulisa abaphulaphuli bakho, khulisa ingeniso yakho.
Iingxelo ezigqityiweyo kunye ne-infographics ehamba nazo ziya kuba luncedo, zibe luncedo, kwaye ulwazi olunyanzelayo kuwo wonke umvelisi womxholo. Wonke umntu othatha inxaxheba kuphando uya kufumana ikopi yasimahla yengxelo epheleleyo, kubandakanya ukuqonda kunye nokufumana izixhobo, iindima, uxanduva, itekhnoloji, izixhobo, ukusebenza, ukuhamba komsebenzi kunye nokunye kwamaqela omxholo wobuchule kunye nabadali.
Thatha uVavanyo lweMveliso yokuFunda
tags: NiseloInkqubo yomxholoimveliso umxholoIndlela yokuvelisa umxholoimveliso umxholoUmgangatho wokuvelisa imvelisoumxholo wophando lwemvelisoiingcali zomxholouxanduva lomxholoiindima zomxholoumxholo wabasebenziuphando lomxholoItekhnoloji yomxholoUkuqhubela ezantsi
9 Iimpazamo zokufika kwiphepha omele uziphephe